FBC - Hojii hojjattoota ragaa barnootaa sobaa qabatanii hojjatan qulqulleeffachuu hojjatameen hojjattoonni mootummaa 6, 348 ofiisaanii saaxiluu isaanii ifoomsame
Hojii hojjattoota ragaa barnootaa sobaa qabatanii hojjatan qulqulleeffachuu hojjatameen hojjattoonni mootummaa 6, 348 ofiisaanii saaxiluu isaanii ifoomsame
Finfinnee, Fulbaana 02, 2010 (FBC) Hojii hojjattoota ragaa barnootaa sobaa qabatanii hojjatan qulqulleeffachuu Naannoo Oromiyaatti hojjettameen hojjattoonni mootummaa 6, 348 ofiisaanii saaxiluu isaanii Biiroon Pablik Sarvisii fi Misooma Humna Namaa beeksiseera.
Biiroon Pablik Sarvisii fi Misooma Humna Namaa Naannoo Oromioyaa rakkoo bulchiinsa gaarii furuuf fi rakkoo qulqullinaa fi waliin-ga’iinsa waliin wal-qabatee isa mudate furuuf darbees komii uummataa yeroodhaa gara yerootti ka’utti deebii kennuf humna hojjataa mootummaa guddisuun murteessaa ta’uu amanuuni sochii haaromsaa kan jalqabe.
Kanaafis hojjataan Mootummaa Barnootaa fi Leenjii walirraa hin-citne argatee hojii tajaajilamaa quubsu hojjachuurra darbee hawaasni tajaajilamaa beekumsaa fi ogummaan akka geggeffamu gochuuf yeroo gara-garaa bifa eerumsaan kan ka’u hojii ragaa barnootaa sobaa qulqulleeffachuu jalqabeera.
Biiroonsaas hojjataa mootummaa sadarkaa sadarkaan jiru mariisisuun fi dogoggora isaaniirraa baratanii ofiisaanii akka saaxilan Adoolessa 15 hanga hagayya 22tti waltajjii bane irratti hojjattootni mootummaa sadarkaa gara-garaa irra jiran muuxannoo hojiidhaa jalqabee ragaa sobaa hanga digrii lammaffaa sobaa fayyadamneerra jechuun ofiisaanii saaxiluu isaanii Hogganaan Biiruchaa Doktar Biqilaa Hurrisaa Himaniiru.
Ragaa sobaa fayyadamuun hojjattootni kunniin miindeffamuunsaaniis ta’e guddiuna argachuunsaanii qaawwaa hanqina too’annoo fi hordoffii ta’uusaa hogganaan kun kaaseera.
Dhiifama gochuun kun namoota dhuunfaa kanneen guutumaan guutuutti bilisa taasisa gochuu osoo hin-taane bakka hojjattoonni kunniin ragaa sobaan qabatan gadhiisisuun tarkaanfiin bulchiinsaa irratti fudhachiisa jedhaniiru.
Yeroon itti of-saaxiluu boqonnaa jalqabaa xumurameera; boqonnaa lammataan bilbila bilisaa 888 eerumsa fuudhuu fi qorannoon faayilaa jalqabamuusaa kan himan hoggantichi, hojimaata kanaan namoonni ofiisaanii hin-saaxille tarkaanfiin bulchiinsaa fi seeraa irratti fudhatama jedhaniiru.
Keessumaa ragaa hanga ammaatti argameen ragaan barnootaa sobaa kan argame bara 1995 asitti waan ta’eef yeroo sana booda kan miindeffaman akkasumas barnoota dabalataa baranneerra jedhanii guddina kanneen argatan irratti dhaabbilee naannichaa gara-garaatti hojiin qulqulleessuu akka hoijjatamu eerameera.
Oduuwwan Biroo « Lixa Arsiitti lolaan midhaan maasii lafa heektaara kuma 2 olii irratti miidhaa geessise	Dippilomaasiin dinagdee xiyyeeffannoo hariiroo alaa Itiyoophiyaa isa guddaa ta’ee itti-fufa: Ministira Muummee Haayilamaariyaam »